FLM Morondava : misokatra indray ny sekoly fiompiana sy fambolena | NewsMada
FLM Morondava : misokatra indray ny sekoly fiompiana sy fambolena
I Morondava, renivohitr’i Menabe, manana ny rehetra ho an’ny fambolena sy ny fiompiana, manomboka amin’ny olona, tany, sy izay mety ho azo volena sy ompiana rehetra. Harena lehibe ho an’ny faritra izany.
Manao asa ho an’ny fampandrosoana amin’ny sehatry fambolena sy fiompiana ny Fiangonana Loterana Malagasy na ny FLM any Morondava, antony nananganany sekoly manokana misahana izany. Noho ny antony maro anefa, valo taona izao io sekoly io nikatona ary ankehitriny miverina misokatra indray izany ao amin’ny Fofafa, Bemanonga, nomena ny anarana hoe “La Ferme de Tasarafototra”. Hatao hanampy ny vahoaka izany, indrindra ny tanora, hisarika ny sain’izy ireo hifantoka amin’ny fambolena sy fiompiana. Atao indrindra koa hanampy ireo tanora marobe tsy an’asa any an-toerana.
Mpitarika sy mpandrindra ny fanokafana indray io sekoly io Atoa Fienena Richard. Samy nandray anjara avokoa ny rehetra amin’izany asa fanarenana izany. “Manarina isika izao ary hatramin’izao, mbola manarina. Tsy mora ny manao izany fa noho ny ezaka nataon’ny tsirairay sy ny mpiara-miasa rehetra, singanina manokana ny FLM izay nanome anay fahafahana hanarina indray izany sekoly momba ny fambolena sy fiompiana izany. Haverina ny teo aloha ary hohatsaraina hahafahanay mampianatra sy manome traikefa ara-teknika ny tanora. 7 000 ny mananasy novolena, 3500 fototra ny voasary….tsy ho lanin’i Morondava aby izany fa ho hitansika eo ny tohiny”, hoy i Fienena Richard.
Sompitra iray lehibe i Morondava
Sompitra iray lehibe eo amin’ny voly vary i Morondava, manampy betsaka amin’izany ny fisian’ny lakandranon’i Dabara. Mila fikojakojana mitohy anefa io fotodrafitrasa io mba hahatsara hatrany ny voly vary any an-toerana sy hahazoan’ny mpianatra mampihatra ny fiofanana azony mandritra ny fianarana asa. Mampalaza ny faritra Menabe ihany koa ny fiompiana omby sy ny biby hafa. Anisan’ny ahazoana fiofanana ao amin’ny sekoly « La Ferme de Tasarafototra » izany miaraka amin’ireo teknisianina.
Tsy fandriampahalemana ny olana any amin’ny faritra, toy ny any an-kafa rehetra, ka zary mampiverin-dalana sy mahakivy tanteraka ny tantsaha. Eo ny tompon’andraikitra tokony hijery akaiky izany ho fiarovana ny mponina sy ny asa fihariany.